Qodobada Aad Naftaada Ku Horumarini Karto |
Waa Maxay Aragtida Jaraha ‘Game theory’?
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, February 10, 2019
Horumarka & Deegaanka
Cabdijabaar Sh. Axmed, January 16, 2016
Taariikhda Magaalada Qardho oo Kooban
Raxma Cali Yuusuf, April 9, 2018
Nolosha oo Dhan Wa 3 Maalmood|Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 3, 2016
Waxa weeye in aad marka hore aqoonsantahay in aad tahay qof Ilaahay abuuray oo uu keenay adduunyadan, in aad ku noolaato, waxna ka kordhisato, Ilaahay hibo ayuu qof walba siiyey ,oo qof, qof u eeg-na majiro. Qof walba halkiisa aya uu gaar ku yahay oo hibooyin gaara ah ku leeyahay, waxa aannu adduunkan loo keenay in isaguna wax taransado Illaahayna ku caabudo, dadka kalena taro waxa uu tarikaro, waana dhaqdha-qaaq iyo hawlgal horusocod ah oo looga golleeyahay hagaajinta nolosha, waa horumarinta qof-ahaaneed ee aqooneed, caqliga iyo garaadka aad ka gaadhay darajo. Waa in naftaadu ka horumarta dadka kale si aad hadafkaaga u gaadho, waxaana loo baahanyahay in aad la timaadid cilmi, camal, dedaal, qorshaynta waqtiga, daacadnimo iyo dhaqan wanaagsan, si aad u gaadhid halka aad doonaysay. horumarka noloshu waxa uu bilaabmaa maalinta uu qofku dhasho, waxa aannu ka bilaabmaa Af-barashada uu ilmuhu barto hadalka.
Barbaarinta carruurnimo waa qayb ka mid ah waxannu si toos ah u bilaabmaa horumarka noloshu wakhtiga uu qofku garaadkiisaa isticmaalayo.
Waa gabaygii xaaji aadan afqallooc ee ku saabsanaa waxbarashada iyo horumarka bulshada, aya ah mid uu kaga hadlay sida nafta loo horumariyo iyo isbeddelada nolosha ee jilba jiil beddelaayo ela rabo in ciddba cidda ka danbaysaa ay beddesho lana timaaddo masuuliyad iyo horumar ay ku hananayaan qabyadii qoladii ka horreysay ka tageen iyo waliba in uu qofku xisaabtamo.
Haddii uu geed engego xaabadaa laga idlaystaaye
Mid yar oo iniintiisa ahbaa soo awaal baxa e
Isagaa anfaaciga hadhkiyo oodda kaafiya e
Dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisu
Ubadkooda hadhabaa tabcoo aayatiin hela e
Markii Aadam iyo Xaawa iyo kaynta la abuuray
Sidaasay arwaaxdiyo dhirtuba ku isiraayeene
Umaddaan shabaabkeedu hanan waa u ayaan xuma e
Inamiyo hablahaba waxaad tihiin aarankii kacaye
Itaal gabe dadkiinii hore waydin aragtane
Idinkaa ammaanada xilkii eeggan qaabilaye
Iskaa wax u qabsada noloshu waa udub dhexaadkiiye
sraafkiyo fadhigu waa waxaad ku anbanaysane
Axmaqnimo wakhtiga kaaga tagay oohin kugu reebye
Ayaantii ku dhaaftana waa waxan la eegayne
Axadkii kaslaan ahi sabool abidkii weeyaane
Haddii maanta aad wayddiiso qofkasta oo bulshada ka mida in u doonayo horumar waxa uu ku odhanayaa waan doonay,. Waxa dhacday markii aan wareysiga buuggan bilaabay aya aan warreystay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaa iga yaabiyey wiil aan warreystay oo ah derbi-jiif fadhiya meeshii uu xabagta ku cabayey waxa aan wayddiiyey dhawr su’aalood: Waxaan ka mid ahaa su’aalahas aan wayddiiyey waxa uu doonayo in uu noqdo mustaqbal ka, waxa uu iigu jawaabay “Waxa aan doonayaa in aan noqdo madaxweynaha adduunka oo dhan”,markaasan ku idhima Somalilaand mise adduunka oo dhan?
Markaas ayuu yidhi “adduunka oo dhan”. Bal u fiirso, gacan waxa u ku sitay xabagtii waxan uu fadhiyey gidaar qashin badan, waxa dushiisa ku dildillaacay dhar uu xidhnaa, haddana wali waxa uu leeyahay doonis. Tani waxa ay inoo caddaynaysaa in doonis keliyi aanay meel ina gaadhsinayn ee ay tahay in la la yimaaddo doonis hiraal, ficil, kago’naansho iyo muddeyn leh. Haddaba si aynnu doonisteenna uga midho-dhalino waa in aynnu raacno tallaabooyinkan hoos ku qoran, kaddibna aynnu u soo gudubino bulshada kale, inaga oo ka bilaabayna dadka kuwa inoogu dhaw, tanina waxa ay u baahantahay dedaal is daba-jooga.
Waa hannaan shareecada islaamka waafaqsan, qof kuna ku hormarinayo ama ku raadinayo xirfad, cilmi, dhaqaale, habdhaqan toosan iyo xidhiidh bulsho, taas oo gaadhsiinaysa in uu darreemo raali, degganaan iyo nabad gudahiisa ah, kuna kaalmaynaysa in uu diiradda saaro sida uu ku gaadhii lahaa hadafyadiisa nololeed, iyo sida uu ugu guulaysan lahaa culaysyada soo wajaha, ee hakinaaya horu -socodkiisa.
Qeexitankani waxa uu ku dhisan yahay qodobo muhiim ah oo kala ah
Hadafka/Yoolka guud ee qofka muslimka ahi uu nolosha ka leeyahay waxa ay tahay in uu gaadho raali ahaanshaha Allah, galana Jannada, sidaa darteed, waa in uu udhaqmaa qofku hab gaadhsiin kara yoolkaas. dhammaan ahdaafta kale waxa ay kaalmaynaya ahadfkas nololeed ee guud. Tusaale ahaan ah-daafta kale ee qofka waxaa ka mid ah in uu hanti yesho, waana in lagu tabcaa waddo xalaal ah, si ay u kaalmeyso hadafka guud ee nolosha, Isku soo wada duub oo is-horumarintu waa in ay tahay mid ku salaysan ama waafaqsan diinta Islaamka. Qofka loo gama baahna in uu ka
raadiyo is-hormarintiisa waxyaabo aan waafaqsanayn shareecadda Islaamka. Is-hormarinta waxaa sal u ah xoojinta sidii uu u daahirin lahaa qofku nafsaddiisaa si uu u gaadho dhaameystirnaanta Iimaanka ama sare ugu qaado isla markana uu ka fogaado wax kasta oo hoos u dhigaya Iimaankiisa. Sida kale Is-horumarintu kuma xidhna da’ ama xilli go’aan, ee waa hawl joogta ah oo looga baahanyahay qofka. Isla markana uu ku dedaalo wax kasta oo ka qeyb qaadanaya horumarkiisa ha ahaato Cibaado fara badan, Cilmi kororsi abuuris xidhiidh fiican oo bulshada dhexdeeda ah.
Muhiimadda ay leedahay is-horumarintu, waxa ka mid ah
Ugu horreyn ma jiraan adduunkan wax sugan. Is bedbeddel joogta ah ayeynnu ku jirnaa, sidaa darteed waxaa loo baahanyahay sidii loola qabsan lahaa is-bedbeddel-kaas, uuna qofku si joogta ah isu-hormarin lahaa si uusan uga hadhin tareenka nolosha.
Waxaa kale jirta baahi joogta ah oo ah dhinaca xirfadda iyo macluumaadka intaba, qof kastana waxa uu u baahanyahay si joogta ah in uu u baadi goobo Suuqyada shaqadaa manaxariistan ee waxa ay u baahanyihiin xirfado cusub iyo macluumaad dheeri ah. Haddii aadan aheyn qof si joogta ah isku hormariya, tartanka shaqada waad ka hadhaysaa, wayna kugu adkaynaysaa in aad la qabsatiid shaqada. Culaysyada nolosha soo waajaha way badan yihiin, sidaa daraaddeed waxa aad u baahantahay in aad markasta baratid tabaha iyo sidii aad ula dhaqmi lahayd ama uga gudbi lahayd culaysyadaas.
Tags: Qodobada Aad Naftaada Ku Horumarini Karto
Next post Siddee Ayaynu u Gaadhi Karnaa Horumar Nafeed?
Previous post Waa Maxay Carro-biyeed?